Jet fighter dara, gbawara n'ihu ọtụtụ puku mmadụ na ihe nkiri ikuku Romania
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Jet fighter dara, gbawara n'ihu ọtụtụ puku mmadụ na ihe nkiri ikuku Romania
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ gbasara Romania • Safety • Tourism • trending Ugbu a
Onye ọgụ ụgbọ mmiri Rome bụ Mikoyan-Gurevich MiG-21 Lancer dara n’akụkụ oge a na-egosi ikuku, gbawara n’ihu puku kwuru puku mmadụ.
Otu onye agha ụgbọ mmiri Romania dara mgbe a na-egosi ihe nkiri, na-agbawa n'ihu ọtụtụ puku mmadụ. Foto ndị dị n’ebe ahụ gosiri ire ọkụ na oké anwụrụ ọkụ.
Mikoyan-Gurevich MiG-21 Lancer dara n'ihe dị ka elekere 1:30 nke mgbede oge Satọdee, ihe dịka 10km (kilomita 6.2) n'akụkụ ugwu nke Fetesti Airbase na Calarasi County, Romania, ka Cotidianul.ro kwuru, na-ekwupụta nkwupụta nke Ozi Nchekwa. Ihe ọghọm ahụ gburu onye ọkwọ ụgbọ elu ahụ, 36-Lieutenant-Commander Florin Rotaru, dị afọ XNUMX.
Ndị akaebe gwara telivishọn obodo na ọ nwere ike bụrụ na onye ọkwọ ụgbọ elu ahụ ahọrọ ịpị na mpaghara dị nso iji zere ịpịa igwe mmadụ. Ihe ruru mmadụ puku anọ nọ ya bụ ihe nkiri nkiri, ka ụlọ ọrụ Reuters kwuru.
Ihe onyonyo di na soshal midia na-egosi oge ihe mberede ahụ mechara, mgbe ụgbọelu ahụ nwuru ọkụ.
Vidio gosikwara anwụrụ ọkụ ojii na-akwụgo site na ebe ahụ.
Mgbe ọdịda ahụ dakwasịrị, Minista na-ahụ maka nchekwa Mihai Fifor gwara Romania TV na ụgbọ elu ndị ụgbọelu ndị Romanian niile nọ "na-arụ ọrụ zuru oke," ọ dịkwa ngwa ịkọ nkọ banyere ihe kpatara ya. Kaosinadị, Cotidanul.ro kwụrụ na ụgbọ elu MiG 24 dara kemgbe 1994. A na-enyocha ihe butere mkpọku a ugbu a.
Mikoyan-Gurevich MiG-21 Lancer bụ onye na-ebu ụgbọ elu nke ụgbọ elu na ụgbọ elu ụgbọ elu nke mepụtara n'oge Soviet Union site na Mikoyan-Gurevich Design Bureau.